पवित्राको ‘मौलिकता’…. – Hatteri.Com
News for Hong Kong Nepalese
प्रतिभाशाली नवगायिका पवित्रा राईको स्वर र संगीत रहेको “मौलिकता” शीर्षकको गीत रिलिज भएको छ । आफ्नो युट्युब च्यानल मार्फत नयाँ साल २०२० सालको शुभ आगमनसँगै रिलिज गरिएको भिडियो उनकै आफ्नै कन्सेप्टमा निर्माण गरिएको हो ।
सूर्योदय नगरपालिका इलाममा किसान परिवारमा जन्मी हुर्किएकी पवित्रा हाल काठमाण्डौमा बसी अध्ययनको साथै गीत-संगीत र नाटकमा काम गरिरहेकी छिन् । उनले रेडियो फिक्कल/इलाम, रेडियो सरगम/झापा र रेडियो आँगन/विर्तामोड , रेडियो पूर्वेली आवाज मा रेडियो प्रस्तोताको रुपमा काम गरिसकेकी छिन् ।
६ साल अगाडि पहिलो पटक गीत रेकर्डिङ गराएकी पवित्राले हालसम्म ५-६ गीत गाइसके पनि “मौलिकता” उनको पहिलो रिलिज गीत हो । यसको भिडियोलाई योगेश दाहालले छायाँकन तथा संपादन गरेका छन् भने देबेश राईको संगीत संयोजन रहेको छ । यस गीतका गीतकार रबिन बान्तावा खाहोङ् रहेका छन् ।
← ओसन पार्ककको आर्थिक स्थिति खस्किँदो…
हाइकिङ जाँदा बारुलाको आक्रमण.. →
प्रतिभाशाली नवगायिका पवित्रा राईको स्वर र संगीत रहेको “मौलिकता” शीर्षकको गीत रिलिज भएको छ ।
हङकङेली जनतालाई सरकारले राहत बाँड्ने…
हङकङमा मापदण्ड भन्दा बाहिर रहेर माक्स बेच्नेलाई ५ बर्ष जेल सहित…
हङकङमा भाइरस संक्रमित १० …!
पुन रमेश on ओसन पार्ककको आर्थिक स्थिति खस्किँदो…
Copyright © 2020 Hatteri.Com — Primer WordPress theme by GoDaddy